हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र चाहिन्छ
डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी राप्रपाबाट अलग भएर हिडेको लामो समय भएको छैन तर उनी ठिक रहेछन् भन्ने कुरा एकीकृत राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर जबरा अलग्गिएबाट पनि स्पष्ट हुनपुगेको छ ।
पशुपति शमशेर जबराले एकीकृत भएपछिको केही महिनामै राप्रपालाई टुक्रा पारिदिएका छन् र कमल थापाको भन्दा पनि ठूलो पार्टी बनाइदिएका छन् । यो त भविष्यले बताउला कि डा.लोहनी र पशुपति एक ठाउँमा बस्लान् नबस्लान्, अथवा पशुपतिको पार्टी यत्तिकै अघि बढ्ला कि फेरि एकीकृत होला ? कमल थापा ठिक कि पशुपति शमशेर ?
१० वर्षको अनुभवले देखाइसक्यो, अव हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र नैचाहिन्छ । हामी बढ्दो भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका छौं, नेपालीलाई विदेश पठाउने काम मात्रै भइरहेको छ । अबको १० वर्षभित्र कोही पनि नेपाली कामका लागि विदेश जानु नपर्ने वातावरण बनाउनका लागि हामीले सरकारलाई दबाब दिन लागेका हौं ।
सरकार नै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेका छ । सरकारले भ्रष्टाचारलाई नै जीवनपद्धति बनाउन खोजिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु संसद, संसदीय समिति, मन्त्रालय र मन्त्री सबै भ्रष्टाचारको पक्षमा देखिएका छन् । देशमा भ्रष्टाचार बढेको होइन, बढाइएको छ । सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।
भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सबै पक्षबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र अन्याय बढ्यो भनेर नै हामीले आवाज उठाउन लागेका हौं । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन गरिहेका छौं । सबै धर्मको सम्मान र पहिचान स्थापित हुनुपर्छ र नेपाल हिन्दुराष्ट्र बनाइनैपर्छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउने क्रममा जनमत संकलन गरेको थियो । त्यसबेला प्राप्त भएका २ लाख लिखित जनमतमध्ये ९० प्रतिशतले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम राख्नुपर्छ भनेर सुझाब दिएका थिए । त्यो जनसुझाव नमान्नु ठूलो कमजोरी भएको छ । संविधानमा दलको कुरा होइन, जनताको रायलाई समेट्नुपर्छ । त्यो जनसुझाव अहिलेसम्म कहाँ लुकाइएको छ ?
राप्रपाले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई उपेक्षा गरेकाले म अलग्गिएको हुँ । सबै सत्ताको लागि झगडा गरे । पार्टीको मुद्दा ओझेलमा पारे । त्यसैले म एजेण्डा बोकेर लडिरहेको छु । संविधान संशोधन गर्न मिल्छ । राजपाको मागमा संशोधन गर्न दलहरु लम्पसार भएर लाग्न सक्छन् भने राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा हामी लाग्न सक्नुपर्छ । हामी मिलेर यो एजेण्डा बोकेर जनतासमक्ष गइरहेका छौं । गणतन्त्र आएको १० वर्षसम्मको अनुभवले पनि नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता छ भनेर देखिएको छ ।
हामी पनि तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका छौं, हाम्रो दलको चारवटा एजेण्डा छन् । नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डासँगै राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने पनि हाम्रो एजेण्डा हो । राष्ट्रिय चरित्र बोकेको राजसंस्थाको उपस्थिती नेपालका लागि अति आवश्यक छ । तेस्रो एजेण्डा भ्रष्टाचारविरुद्ध हो । चौथो एजेण्डा भनेको अबको १० वर्षभित्र नेपालमै रोजगारी सृजना गर्ने हो । कोही पनि नेपाली कामको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने हाम्रो एजेण्डा हो । हो, एजेण्डा आकर्षक छ । एजेण्डाअनुसार काम होला र ?